Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hong Kong Tourism Board ary mpiara-miasa amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka miaraka amina sehatra famandrihana fitsangatsanganana an-toerana hitadiavana mpandeha karana
Sehatra famandrihana sy serivisy fitetezam-paritany no nanambara fa niara-niasa tamin'ny Birao fizahan-tany Hong Kong sy Cathay Pacific hisarika ireo mpandeha India izy io.
Sehatra famandrihana sy serivisy fitetezana serivisy no nanambara androany fa nifamatotra tamin'ny Birao Fizahan-tany Hong Kong sy ny Cathay Pacific Airways izy mba hifaneraserana amin'ireo mpandeha avy any India.
Ho solony hahazoana fahitana bebe kokoa eo afovoan'ny Indiana Free Independent Traveller (FITs) sy ny olo-manan-tsaina manam-pahaizana amin'ny teknolojia, io no fiaraha-miombon'antoka lehibe amin'i Klook miaraka amin'ny birao fizahan-tany sy kaompaniam-pitaterana.
Ao anatin'ity fiaraha-miasa ity dia manao fampiroboroboana iraisana eo amin'ny sehatra i Klook mba hampiroboroboana an'i Hong Kong hanodikodina ireo mpandeha Indiana miaraka amina fandrisihana manokana. Izany dia hitondra ny fanoloran'i Klook ho an'ny isan'ny mpandeha lavitra any India izay mitombo 23 tapitrisa * ny fiaingan'ny mpizahatany avy any India. Klook dia manolotra hatramin'ny 60% amin'ny vokatra Hong Kong rehetra, manomboka amin'ny manintona, fitsangatsanganana, fitaterana eo an-toerana, sakafom-pisakafoanana ary fanandramana miavaka hafa izay ahitana ny Ocean Park Hong Kong, Hong Kong Disneyland, na ny traikefa fisakafoana vahiny toa an'i Lin Heung Kui ao amin'ny Sheung Wan sy ny maro hafa. Ny olona tsirairay dia afaka mamandrika amin'ny alàlan'ny App (Android sy iOS) na tranokala maimaimpoana izay azo alaina hatramin'ny tapaky ny volana oktobra.
Amin'ny maha mpiara-miasa stratejika an'i Klook azy, ny Birao Fizahan-tany any Hong Kong sy ny Cathay Pacific Airways dia mikendry ny hanome serivisy farany sy fidirana amin'ny traikefa tsy manam-paharoa amin'ny vidiny mirary indrindra ho an'ireo mpandeha karana. Ho fanampin'izany, ny sehatr'i Klook dia nitazona microsite manokana ihany koa manasongadina ny lohahevitra fampielezan-kevitr'i Hong Kong vao haingana - 'Discover Hong Kong Like A Local' izay ahafahan'ny mpandeha hamandrika traikefa tokana amin'ny sehatra mora ampiasaina. Na mitady andro fitsangatsanganana ianao na tena sakafon-tsakafo marina any Hong Kong, dia azon'ireo mpandeha atao ny mamandrika ireo traikefa niainan'i Klook nofaritan'i mijery ny tranokala. Ireo mpandeha dia tsy maintsy mamandrika ny sidiny miaraka amin'ny Cathay Pacific na Cathay Dragon, izay hahafahan'izy ireo manararaotra fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny fampiasana ny laharana famandrihana ao amin'ilay tranokala fotsiny.
Raha nilaza ny heviny momba ny fiaraha-miasa i Anita Ngai, Lehiben'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Klook dia nilaza fa: "Hong Kong dia manohy mahazo laza sy manintona ireo mpandeha avy any India, ho toerana fialantsasatra mety. Ao amin'ny Klook, mahazo manodidina ny 30% ny mpampiasa avy any atsimo atsinanana sy atsimo atsimo izahay ary nahita fitomboana lehibe avy any India izay ahitan'ny mpandeha hiaina vokatra samihafa mifanaraka amin'ny safidiny. Faly izahay fa miara-miasa amin'ny Birao Fizahan-tany any Hong Kong sy ny Cathay Pacific Airways hanolotra hetsika maro karazana ho an'ny mpandeha Indiana ary hampirisika azy ireo hijery an'i Hong Kong toy ny eo an-toerana. ”
Puneet Kumar, Tale Jeneralin'ny Market Development (India) ao amin'ny HKTB dia nilaza fa ny “Discover Hong Kong Like a Local” dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny tantaran'i Hong Kong sy ny traikefa miavaka amin'ny alàlan'ny feo Indiana tena izy mba hisarihana mpivahiny karana sy manan-katao. Amin'ity taona ity dia mampahafantatra ny kolontsaintsika eto an-toerana isika amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko any amin'ireo distrika nohavaozina toa ny Old Town Central sy Sham Shui Po, Great Outdoors amin'ny alàlan'ny hetsika fitsangatsanganana malefaka toy ny làlana fitsangatsangana sy lalan'ny bisikileta izay manakaiky kokoa ny fampiononana ny fiainana an-tanàna, fisakafoanana ary fiainana alina amin'ny alàlan'ny trano fisotroana tampon-tampon-trano, fivarotana sakafo an-dalambe misy kintana Michelin, foto-pisakafoanana tsy manam-paharoa ary ny Hong Kong Wine & Dine Festival ho fanampin'ny fijerinay sy ny feonay any Hong Kong. Ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Klook sy Cathay Pacific Airways dia ahafahan'ny mpandehandeha Indiana mamolavola ny dia any Hong Kong hitety an'i Hong Kong toy ny eo an-toerana, miaraka amin'ny traikefa an-tanàna sy lamaody izay lafo vidy avokoa. ”
Manam-pahaizana manokana i Klook amin'ny fanomezana traikefa an-toerana fitsangatsanganana ho an'ireo mpandeha any Hong Kong amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo mpandraharaha / mpamatsy eo an-toerana mba hitadiavana hetsika, traikefa na serivisy manana kalitao miavaka. Ny fiaraha-miasa dia hahita ireo marika roa miankina amin'ny marketing nomerika hampiroborobo an'ity fampielezan-kevitra ity amin'ny famporisihana ireo mpandeha Indiana bebe kokoa hitsidika an'i Hong Kong. Ity hetsika ity dia mifandraika amin'ny iraka nataon'i Klook hanohy hanome hery ireo mpandeha hizaha toerana mora foana.
Nihaona tamin'ny masoivoho voatendry any Mexico ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika